Rasmi: Gerard Pique oo ka fariistay Cayaaraha Caalamiga ah | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Rasmi: Gerard Pique oo ka fariistay Cayaaraha Caalamiga ah
(12-8-2018) Daafraca kooxda Barcelona Gerard pique ayaa ku dhawaaqay in uu gabi ahaan ka fariistay ciyaaraha caalamiga ah uu matalo xulka qaranka Spain.
Gerard Pique oo 102 kulan xirtay maaliyada xulkiisa ayaa go’aan ku gaaray in uu soo gabagabeeyo ciyaaraha caalamiga ah,kadib niyad jabkii xulkiisa ay koobka aduunka kala kulmeen.
Ciyaaryahankii hore ee Manchester United ayaa Spain guulo fara badan la gaaray waqtigii uu ka tirsanaa xulka La Roja,waxaana uu kula guuleystay koobkii aduunka 2010 iyo tartanki EURO 2012 oo Talyaaniga ay ka qaadeen.
Go’aanka uu Pique kaga fariistay ciyaaraha caalamiga ah ayaa sidoo kale la sheegay in uu qeyb ka yahay fashilkii ku yimid aftidii loo qaaday in gobolka uu ka soo jeedo ee Catalonia uu madax banaani ka qaato Spain inteeda kale.
Ugu danbeyn Pique ayaa ka farasiishada Spain bilo gudahooda kula biiray xidiga Camp Nou ay ka soo wada ciyaareen ee Andries Iniesta oo isaguna kadib koobka aduunka ka fariistay ciyaaraha caalamiga ah.